Ukuxhumana Phakathi Kwabantu Nezilwane Zasekhaya – The Ulwazi Programme
Abantu abaningi abafuyile emakhaya banezinkolelo ngokwenziwa yizilwane zabo futhi bayakwazi ukuchaza ukuthi isilwane sisuke siqondeni uma senza okuthile. Lezilwane kungaba izinkukhu, amakati, izinja njalonjalo. Sixoxisane noKakiwe Mbatha oneminyaka engu 87 ositshele ngokuthi yena esakhula yiziphi izinkolelo zakubo mayelana nekati, inja kanye nezinkukhu.
Isilwane esifuywa emakhaya esidla ubisi kanye nenyama. Abanye abantu basuke befuna libasize ngokuqeda amagundane ekhaya. UGogo uKakiwe uthi ikati libuye lisize uma kuzovela umkhuba ekhaya noma ngabe oyinhloboni lona lisheshe liwuzwe. Njengokungena kwezulu ekhaya uthi lizwa kuqala ikati kuthi noma kuvaliwe iminyango lizame ngayoyonke indlela ukuphuma kuleyondlu, lithi lingaphuma lisale lingena izulu. Kuthiwa uma ungumuntu okwaziyo ukubheka imikhuba yezilwane zakho uyakwazi ukuphepha nawe. Mancane amathuba okuthi ikati lishaywe izulu kuthiwa kumele ulandele lona maseliphumile noma ngabe kuyanetha ngoba lapho liyakhona kusuke kuphephile.
Okunye futhi okuthinta ikati ukufikelwa isivakashi ekhaya. Esikhathini sakudala izindlela zokuthi wazise abantu uma uzobavakashela zazingekho uma uqhathanisa nesikhathi sanamuhla. Izilwane zazidlala indima enkulu kulokhu njengokuthi uma kukhona ikati belibonakala ngokuthi lizikhothe umzimba wonke (kuthiwa liyageza) kwakwaziwa ukuthi uma ikati lenza lokhu kuzofika isihambi. Abantu basekhaya babeqala bahlanze izindlu ukulungiselela lowo ongase afike, nangempela wayefika umuntu. Esinye isilwane noma isinambuzane esingahlanganiswa nalesibonelo isicabucabu esehla ngolwembu endlini naso bathi sisuke sibika umuntu ozofika. Kanye nengane encane ekhaya kuthiwa uma ilokhu ithwala okuthile kusuke kusho ukuthi kukhona umuntu ozofika ethwele.
Kuthiwa noma kuzovela umkhuhlane ekhaya ikati libonakala ngokuzibhuquza phansi likhombise ukugula kuthi ngemuva kwezinsukwana kube khona okuvelayo ekhaya mhlawumbe emfuyweni noma kumuntu osemdala. Bekwenzeka konke lokhu umndeni usulindele uma kuwukuthi bayakwazi ukukuvimba bebekuvimba uma behlulekile ukubona ukuthi beliwukhombaphi umkhuba, bebeze babone ngawo sewenzeka.
Ezinkukhwini kuvamise ukuthi iqhude elinamandla ekubikeni izinto ezizokwenzeka. Njengokuthi uma kuzofika isivakashi liyakwazi ukuzwa, libonakala ngokuthi likhale phambi komnyango libelesela. Kanti futhi belisiza ngesikhathi kungakabikhona amawashi, abesiza ngokukhala uma sekusile. Abantu bebekwazi ukuthi baqikelele ukuthi selikhala okwesingaki, ikakhulukazi kulabo abasuke bezothatha uhambo olude. Bekubalulekile ukuthi umuzi nomuzi ube nayo inkukhu ngoba amawashi ayengekho.
Izinja nazo ziwusizo kakhulu ngoba zibheka ukuphepha ekhaya futhi zilekelela nasemfuyweni. Abafana uma beyolusa bahamba nazo zibaqaphelele izinkomo noma izimbuzi uma besayofuna okudliwayo noma bezunywe ubuthongo ngokuthi bazizwe sezikhonkotha uma seziduka noma sezihambe ibanga elide. Futhi izinja ziyakwazi ukuzwa imimoya emibi, zizwakala ngomkhulungwane.